Ciidamada Badda ee wadanka Ingiriiska oo qabtay Burcad badeed Soomaali ah – SBC
Ciidamada Badda ee wadanka Ingiriiska oo qabtay Burcad badeed Soomaali ah
Markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Badda ee Boqortooyada Ingiriiska ayaa gacanta ku dhigay Burcad badeed Soomaali ah oo tiradooda gaareyso 13 qof kuwaasi oo watay dooni noo dheeraya oo mareysay Xeebaha Badweynta India.
Warkan oo ka soo baxay wasaarada Difaca ee wadanka Britain ayaa lagu shegay in Mid ka mid ah Maraakiibta Dagaal iyo Diyaaradaha Qumaatiga u kaca ee Britain ah howlgalkan fuliyeen.
Diyaarad Nooca Helicopterka ah oo ay wateen ciidamada badda ee ingiriiska ayaa rasaaas digniin ah ku riday doonida ay wateen burcada soomaalida taasi oo ku aadan inay joogsadaan hase ahaatee Burcad badeeda Soomaalida ayaa ka dhago adeygay Amarka Ciidamada waxaana ka dib ciidamada Badda ee Britain ay u soo direen Markab Dagaal oo ay leeyihiin ciidamada kaasi oo gacanta ku dhigay 13 qof oo doonta la socday iyo hub ay wateen.
Captain Gerry Northwood, oo ah sarkaalka ciidamada Britian ee howlgalkan hogaminayay ayaa sheegay in howlgalkan uu fariin cad u dirayo Burcad badeeda Soomaalida ee isku dayaysa inay weeraraan gadiidka maraya Xeebaha Caalamiga ah.
Ciidamada badda ee Boqortooyada Ingiriiska ma sheegin sida ay ka yeeli doonan Burcadan Soomaalida ah ee ay ku qabteen hubka iyo agabka kale
Bilowgii Todobaadkan ayay ahayd Markii Ciidamada Badda ee Britain ah ka hortageen weerar isku day ah oo lagu qafaalan lahaa Markab ganacsi oo marayay meel u dhow Xeebaha wadanka Soomaaliya.